कवि, कविता र टिकट | Kavyakunja
कवि, कविता र टिकट
भाग दुईमा पनि पनि ‘समात, समात’ भन्दै एउटाले अर्काेलाई लेखेटिरहेको हुन्छ । तर, भाग्नेलाई कसैले समातिदिँदैन । बरु, लखेट्नेलाई नै समातेर वटुवाहरूले भन्छन्, ‘छाड्दिनुस् उसलाई, उसलाई तपाईको कविता सुन्न मन छैन भने किन जर्बजस्ती गर्नुहुन्छ ?’ लखेट्ने मानिस ट्वाँ पर्छ र भन्छ, ‘केको कविता ? मेरो खल्तीको सबै पैसा चोरेर भाग्यो, त्यही भएकाले लखेटेको !’ खेद्ने र भाग्ने दुवैजनालाई वटुवाहरूले कवि पो भनिठानेछन् ! त्यतिन्जेलमा त्यो पाकेटमार गायब भइसकेको थियो ।
bonod sapkota says:
उत्कृष्ट ब्यंग्य रचना लाग्यो । असाध्यै मन छुने रचनाका लागि लेखकज्यूलाई धन्यवाद ।